वामी टक्सारमा शाक्यबन्धुबाट गोदाई खाने दलित नै प्रहरी हिरासतमा ! – ebaglung.com
२०७४ पुष १९, बुधबार २०:०९	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार 1 comment
प्रेम सुनार, गुल्मी, २०७४ पुस १९ । आज दिउँसो गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका भित्र पर्ने वामीटक्सार वजारमा मदिरा सेवन गरी स्थानिय ठुला बडा संग मुख लाग्ने एक दलितलाई कुटपिट गरी उनलाई नै प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ८ वामी मैदान निवासी वावुराम परियारले वामीटक्सार बजारका संसार शाक्य लगायतबाट कुटाई खाएका हुन् ।
परियारले घर जानका लागि वामीटक्सार बजारको वसपार्कमा दिउँसो जिपको टिकट काटेका थिए । साथमा उनकी छोरी सहित ६ जना थिए । साढे तिन वजे हिडनु पर्ने जिप परियारले ढिला गरे पछि टिकट काउण्टरका सन्तोष शाक्य रिसले चुर हुँदै फोनमा वोलाई रहेका थिए ।
परियार ढिला गरी आए । शाक्यको हप्काई सहन नसके पछि उनले पनि शाक्यकै जस्तो शव्दमा मुख छाड्न थाले । परियारले भने–‘ के गरुँ त नास्ता गर्ने क्रममा ढिला भयो, ठिकै छ तपाईको गाडीमा नभए अरुको गाडीमा जाउँला ।’ त्यो भन्दै परियार छतमा राखेको आफ्नो समानहरु झिक्न थाले । त्यस पछि सुरु भयो शाक्य बन्धुहरुकै शव्दमा उनि माथी लछारपछार ।
परियारलाई निर्घात कुटेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीधेरै छन् । प्रत्यक्षदर्शी भन्छन कुटपिट गरी सके पछि कुटपिट गर्नेहरुले नै मदिरा सेवन गरेको भन्दै वामी प्रहरीलाई फोन गरेर उनै पिटाई खाने व्यक्तिलाई अहिले प्रहरी कस्टडीमा पुराईएको छ ।
परियारकी २४ वर्षिया छोरी सिता परियारले भनिन–‘ वुवा र हामी होटलमा नास्ता गर्दै थियौँ । काउण्टरबाट अत्ताउँदै हुनुहुन्थ्यो । पछि हामी काउण्टरमा आउँदा वुवालाई गाली गलौज गरियो । त्यस पछि वुवाले ठिकै छ अर्को गाडीमा जाउँला भनेर समान झिक्न के खोज्दै हुनुहुन्थ्यो काउण्टरका संसार शाक्य, उहाँका दाजु सुदर्शन शाक्य र उहाँका कान्छा भाई सन्तोष शाक्य मिलेर एकाएक कुटपिट गर्नु भयो ।
आरोपित शाक्य बन्धुहरु संग सम्पर्क राख्दा गाडीमा चढ्न ढिला गरेको र मदिरा सेवन गरी मुख छाडेकोले सामन्य लछारपछार गरिएको बताए । त्यस प्रहरी चौकीका असई मुक्ति पुनले उहाँहरुले कुटेको होईन सामन्य भनाभन मात्रै भएको जिकिर गरे ।
संगै रहेका मुसिकोट ८ का वडाध्यक्ष नारायण सापकोटाले परियारलाइ निर्घात कुटेको देख्ने त्यति धेरै मान्छे हुँदाहुँदै पनि यहाँका असईले ढाँटेर एउटा कुटाई खाएको दलितलाई अन्यायमा पार्न मिल्छ ? भन्ने प्रतिकृया दिए । उनले भने –‘ यहाँ त अचम्म भयो जसले गोँदाई खाएको छ उसैलाई पो प्रहरीले पक्रेर राखेको छ । अहिले मिलौं भनिएको छ तर हामी अहिले मिल्न चाहन्नौ, मदिरा सेवन गरेको मान्छे छ भन्दैमा कुट्न–मार्न पाईन्छ र ? वडा नम्वर ७ का वडाध्यक्ष प्रकाश काफ्ले , वामीकै वासीन्दा रामबहादुर वोहरा लगायतले पनि यस घटनको घोर निन्दा गरेका छन् ।
‘अझै पनि समाजमा दलितहरुले गाउँका ठुला बडा पुँजीपतिहरु संग चर्को स्वरमा बोल्न पाईदैन भन्ने यो पछिल्लो उदाहरणका रुपमा हामीले लिएका छौं ,–‘काफ्ले सहित त्यहाँका जनप्रतिनिधीहरुले भने –‘मदिरा सेवन गरेको वाहनामा मान्छे कुट्न पाईन्छ ?
उता कुटाईमा संलग्नको आरोप लागेका वामीका समाजसेवी सुदर्शन शाक्यले भने–‘ त्यसो भए आउनुहोस तपाईहरु र यहाँको जाँड रक्सी नियन्त्रण गरी दिनुहोस् । जाँड रक्सी नियन्त्रण मान्छे कुटेर हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने कुटिएको चाँही होईन लछार पछार चाँही गरिएको हो । वामीका भित्रि सडकहरुमा २० वर्ष पुराना जिपहरु चलाएर स्थानियले खतरा मोल्दै आएको बताईएको छ ।
स्मरण रहोस चोरी र ठगी काण्डमा परेका एक जना दलित युवा महेन्द्र बिकलाई त्यसै वामीमा दुई वर्ष अघि बाँधेर कालोमोसो दलेर निर्घात कुटपिट हुँदा पनि त्यहाँका प्रहरीले सुरक्षा दिएको थिईन । कुनै पनि अपराधीलाई स्थानियले कानुन हातमा लिएर त्यसो गर्न पाईदैन ।
महिलाहरुले आफनो अधिकार सही तरिकाले प्रयोग गर्न आग्रह !
January 4, 2018 at 12:25 pm -
यस्तो हरुलाई कारवाई गर असहि पुनलाई पनि बस्खास्ता गर शाक्यहरुको गाडि सनचालन गर्न रोक लाउनु पर्छ पैसा तिरेर पनि उनी हरुले नै सयोग गरे झै पिटाई खाने उनी हरुलाई नि पुलिस थुन्ने यो कहाको कानुन सबै पैसा बल मा बिकेको छ यो पुलिस प्रसासन नै हो त्यो शाक्य तुरुनत कारवाई गरौ यो जताततै भइ रल गरौ नेपाल कानुन लाई धज्जि उडाउने हरुको नेपाली मन भएको साथी भाइ हरु यो हजुर हरु माथि पनि पर्न सक्छ सचेत रहु